TTSweet: ပို့စ်မှာ အလ္လာပ သလ္လာပ
AMK November 7, 2011 at 12:49 PM
တီဆွီ နောက်လ ဈေးရောင်းပွဲ ကလဲ villawood Hall မှာဘဲလုပ်မှာလားဟင် သွားချင်လို့နေရာလေး အချိန်နီးရင် comfirm လုပ်ပါအုံးနော် ကျေးဇူး
T T Sweet November 7, 2011 at 1:01 PM
ဟုတ်ပါတယ်။ villawood Hall မှာပဲ လစဉ် အမြဲ လုပ်ပါတယ်။ တီဆွိတို့ ရောက်ကတည်းက လစဉ်နီးပါးရောက်နေကျပါ။ ကိုအန်ဒီတို့ မိသားစုလဲ တစ်ခါဆုံဖူးတယ်။ AMK ကိုတွေ့နေတာကြာပြီ။ ခုမှ ဆစ်ဒနီကမှန်းသိရတယ်။ လာခဲ့ပါ။ ဘုန်းကြီးကျောင်းကတော့ လူများလေ ကြိုက်လေပါပဲ။ ကျေးဇူးနော်။
mstint November 7, 2011 at 1:07 PM
စောစောစီးစီး စွိတီရဲ့ ပို့စ်ကိုဖတ်မိပြီး စားသောက်ဖွယ် စုံစုံလင်လင်နဲ့ ဗိုက်ဆာသွားပြီကွယ်။ ဆစ်ဒနီကို အလည်သွားချင်လိုက်တား) တစ်မြို့လုံး ခရမ်းပြာတွေနဲ့ လှပနေမှာပဲနော်။ ပန်းလေးတွေတစ်ပွင့်ချင်းကြည့်ရတာ ချယ်ရီပွင့်ဖတ်လေးတွေနဲ့ ဆင်သလားလို့ (မျက်စိကတော့ နည်းနည်းမှုံနေတယ်း))
မျှစ်ချဉ်ပေါင်နဲ့ ကြက်မြစ်ကြက်သဲ ကလည်း လှ
တီဆွိ ရဲ့ အလာပ သလာပ ကလည်း လှပြီပေါ့။
Evy November 7, 2011 at 3:08 PM
စားချင်စရာတွေ ဗိုက်ဆာထာ တီဆွိရေ
ကိုဇော် November 7, 2011 at 3:44 PM
ဟာ . .ချဉ်ပေါင်ကြော် . . . .
ရှလွှတ် . . .
Mo November 7, 2011 at 4:29 PM
Ju Ju,alittle translator for mummy!
smarter than mummy? :) :)
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) November 7, 2011 at 5:39 PM
သဘောကျတယ် တစ်ပုဒ်ထဲနဲ့ အစုံမြင်ရ တွေ့ရတယ်
အဲ မြင်သာမြင်ပြီး မစားရတာဘဲရှိတာ..
ရှားရှားပါးပါးမြင်ရတာ စိတ်ချမ်းသာတယ်.. ပျော်လဲပျော်တယ်..
အဲဒါ စိန်ပန်းပြာတွေပေါ့.... အပွင့်မတူပေမယ့် စိန်ပန်းပြာလို့ ခေါ်တယ်...
တီဆွိကြော်ထားတဲ. ချဉ်ပေါင်ကြော်က ကြည်.လိုက်တာနဲ. ရှယ်မှန်းသိပြီးသား၊
တီဆွိက ဟင်းချက်တာ အရမ်းလက်ဆိပ် ရှိတယ်၊ ဟင်းတွေက ချက်ထားတာ နင်.နင်.နဲနဲ တွေဘဲ။ ကြည်.လိုက်တာနဲ.သိသာတယ်။
အရမ်းမိုက်တယ်၊ဒီလိုပို.စ်ဖတ်ရတာ၊ဘာနိုင်ငံရေး၊ဘာပလီပလာတွေမှမပါ၊ အားလုံး ကိုယ်ပိုင် own tune တွေမို. ဒီလိုဖတ်ရတာ ၊စိတ်အေးလက်အေး ရှိတယ်။ ပျော်တယ်။
ညိမ်းနိုင် November 7, 2011 at 6:38 PM
လေပျံမီးခိုးနဲ့ ရည်းစားစာရေးတာကတော့ တဆိတ်ရိုမန့်လွန်းရဲ့...၊xx ဆိုတာ
ကလည်း ကစ်ကစ် တဲ့လား....ထူးဆန်းပါပေ့ ခေတ်ကာလကြီးရယ်....:)
Anonymous November 7, 2011 at 6:52 PM
T sweet...စိန်ပန်းပြာ တွေ က November တိုင်း ပွင့်တယ်။ January လ လောက် ဆိုရင် ငုဝါ တွေ ပွင့် တယ်။ ဦးခြိမ့် ကို Bunning လိုက်ခိုင်း ။Bunning မှာ စပါးလင် ပင် တွေ ဝယ်လို့ ရတယ်။ အပင်စိုက်ရတာပေါ့။ ချဉ်ပေါင်ကတော့ frozen ပဲ ဝယ်လို့ရတာ။ January လကုန် February လ လောက်ဆို ရင်တော့ Fresh ရတတ်ပါတယ်။
rose November 7, 2011 at 10:56 PM
Tsweet... I love your chit-chat post. I can't stop laughing after reading the poem hehe :))) But those flowers don't become yellow in autumn or winter, Tsweet?? Oh... In Sydney, mango tree can grow but not in Sweden. Coconut rice and curry look yummy and Kimchi soup also.
kay November 7, 2011 at 11:35 PM
တီဆွိ.. အဲဒါ စိန်ပန်းပြာပဲ ဟုတ်တယ်လေ..
ကျမတို့ဆီလည်း တမြို့လုံးကို ပြာလွင်နေတာပဲ..
ကလေ ကို သတိရတယ်..
kay November 7, 2011 at 11:36 PM
susu November 8, 2011 at 12:20 AM
Hi T Sweet,
I like Jue Jue Answer X = Kiss.You have lovely ,cute and Smarty daughter.
Anonymous November 8, 2011 at 1:53 AM
မဆွိတီ။ ကျမက အမရဲ့ ပရိတ်သတ်ပါ။ ဘာအေုကာင်းပဲရေးရေး မင်္ဆိ ရေးရင် ဖတ်လို့ ကောင်းတယ်၊ ကွန်မန့် ရေးချင်ပေမယ့် အင်းဂလိပ်လိုလဲ ကောင်းကောင်းမရးတတ် ဗမာလိုလဲ လက်ကွက်တွေ မသိတာနဲ့ မရေးဖြစ်ဘူး၊ အုန်းနို့ ခေါက်ဆွဲ ချက်ချင်တာ။ မချက်တတ်လုို့ မဆွိ ဆီမှာ ရှာတာလဲ မတွေ့လို့ ။ ချက်စားဖြစ်ရင် တင်ပါအုန်းနေ်ာ။
ဖတ်ပြီး ရယ်နေမိတယ်။ စကားမစပ် ချဉ်ပေါင်ကျော်စားချင်လိုက်တာ။ ကောင်းကင်မှာ စာရေးပြီး ကျနော့်ချစ်သူလေးက ကိုယ့်ကိုအဖြေပြန်ပေးရင် ကောင်းမှာပဲလို့ စိတ်ကူးယဉ်သွားတယ်ဗျာ။
heinnlinn November 8, 2011 at 6:51 AM
blueskyforest November 8, 2011 at 2:23 PM
မြန်မာပြည်က စိန်ပန်းပြာကို တကယ်သတိရစေပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ဆစ်ဒနီ စိန်ပန်းနဲ့မြန်မာစိန်ပန်း မတူပါ။ မြန်မာစိန်ပန်းက အရောင်ပိုဖျော့ပြီး ပိုနုတယ်။ သူ့ရဲ့ အသီးက မဲမဲဝိုင်းဝိုင်းလေး။ အပွင့်ကလည်း ပိုရှည်ပြီး ပိုသွယ်တယ်။ ခေါင်းလောင်းအရှည်လေးလိုပဲ။ မြန်မာပြည်မှာ စိန်ပန်းပြာက ခပ်ရှားရှား။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တပင်လုံး ပြာနေအောင်ပွင့်နေတာကို မြင်ရတာက အရသာ ထူးပါဘိ။ ဆစ်ဒနီကပန်းတွေအကြောင်း ဆက်ပြီးပြောပြပါဦး။ ကျန်းမာပါစေ။
rose of sharon November 8, 2011 at 5:04 PM
ချဉ်ပေါင်ကြော်လေး အမြင်နဲ့တင်သွားရည်တွေကျတယ်... စားချင်လိုက်တာ... အဲလိုအထုတ်လေးတွေဒီမှာဝယ်လို့ရရင်ကောင်းမှာဘဲ ..း((
မြသွေးနီ November 8, 2011 at 7:59 PM
ကင်မ်ချိ ၀က်သားကြော် စွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိသည်။
ကောင်းကင်ပေါ်မှာရေးတဲ့ ရည်းစားစာကတော့ ကောင်မလေး ဟာ့တ်ထိသွားမှာ သေချာသည်။ :)
တီိဆွီးရဲ စာဖတ်ရတာ ပျော်လို့..
this flower tree call jakaranda tree.
oh sorry jacaranda tree
တီဆွိရေ အကုန်သဘောတွေ ကျ သွားရေတွေကျ လူကတော့ နေမကောင်းလို့ကုတင်ပေါ်မှာ စိတ်ကူးနဲ့ စားနေလိုက်တာပေါ့း)
T T Sweet November 10, 2011 at 5:45 PM
အန်တီဆွိကို လာရောက်အားပေးကြသောသူများအားလုံး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။
အပေါ်မှ မမြရီ အုန်းနိူ့ခေါက်ဆွဲ တင်ဖူးတယ်ထင်တာ။ ပုံတွေရိုက်ထားတာရှိပါတယ်။ တင်ပေးမယ်နော်။
ခုမှပဲ အဲဒီပန်းတွေက စိန်ပန်းပြာတကယ်ဆိုတာ သိတော့တယ်။ ကဗျာရွတ်ရတာ ပို အားရှိသွားတာပေါ့။း)
ဂျက်ကရန်းဒါးဆိုတာကတော့ ဂျူဂျူကပြောလို့ သိပြီးပါပြီဗျား။
စားစရာတွေ အကုန်သိမ်းကျုံးဖတ်သွားပီး ဗိုက်တောင်
တော်တော်ဆာလာတယ် အမရေ... အကုန်လုံးကြိုက်တာတွေကြီးပဲ ..
အိမ်ပြန်ရင် အမေကို ချက်ကျွေးရအောင်လို့.....
San San Htun November 24, 2011 at 1:35 PM
ကောင်းကနေ ပရိုပို့ စ်လုပ်တာ ခုမှ မြင်ဘူးတော့တယ်...